Ọnụ ọgụgụ nke amụma ọnụahịa | FXCC
Home / trading / Ngwaọrụ Forex / Ọnụ ego nke amụma
Akwukwo ego gi bu amuma amuma
Akuko amuma bu uzo okwu nke n'egosiputa ihe onu ogugu na onu ogugu anya nke ndi isi ndi okachamara mara.
Ihe ngosi nke nchikota ndi mmadu na-achoputa ihe na-abia na ihe omuma afo ise gbasara iri ato di iche iche FX. A na-eme nnyocha ahụ kwa ụbọchị Fraịdee ma bipụtara na 15: 00 GMT. A na-ebipụta nnyocha ahụ n'ofe oge niile: otu izu, otu ọnwa, otu ụzọ n'ụzọ anọ ma na-agụnye ọnụahịa ala maka oge ọ bụla mmiri. Ndị ahịa, ndị ọkachamara n'ahịa na ndị isi na-eduzi nchịkọta a nwere ike ịgbaso ya.
Site na wijetị a, ndị ahịa anyị nwere ohere ịbịaru ngwaahịa pụrụ iche. Ọ bụ ihe na-egosipụta mmetụta nke na-eme ka ndị ọkachamara ahọpụtara 'ọnọdụ dị nso ma dị mkpirikpi ma gbakọọ usoro. Ekwesighi ka ewere ya dika ihe mgbaàmà ma obu dika elere anya, mana dika uzo onu ogugu onu ogugu nke ugbua ka ihe ndi n'echere.
Enweghi ozo n'ime data; a chịkọtara amaokwu ndị a ma wepụta ya ozugbo, dị ka ihe na-egosi na ọ dịghị adaba, enweghị oge ọ bụla. Dị ka nke a bụ ngwá ọrụ bara uru mgbe ejikọtara ya na teknụzụ, ma ọ bụ data nchịkọta isi.
Nkọwa amụma a na-enye data ntanetị, nke dabeere na onye nnọchiteanya nke iri abụọ na ise ruo ndị isi iri ise na-eduzi ndị ahịa n'ahịa, ihe karịrị afọ ise afọ.
Ndị ahịa na-egosipụta àgwà yiri nke ahụ na omume ụmụ mmadụ n'ọtụtụ ala; n'ebumnobi nke a bụ ịgbaso ìgwè mmadụ ahịa. Otú ọ dị, mmetụta nke mmetụta nwere ike, na-akwalite echiche na-enweghị atụ. N'iji ngwá ọrụ a, ndị ahịa nwere ike ịchọta mmetụta dị oke njọ ma zere ịbụ ndị ejidere na ọgụgụ isi anụ.
Ọnụ ego ndị na-akwụ ụgwọ maka ego